अजयको ‘तानाजी’ले कति हालसम्म कमायो ? - Everest Dainik - News from Nepal
अजयको ‘तानाजी’ले कति हालसम्म कमायो ?
काठमाडौंः बलिउड अभिनेता अजय देवगनको सयौं फिल्म ‘तानाजी’ले बक्स अफिसमा आक्रामक व्यापार गरेको छ । फिल्मले कैयौं किर्तिमान तोड्दै बक्स अफिसमा रिलिजको २४औँ दिनसम्म दुई सय ५० करोड कमाई गरेको छ ।
फिल्मले रिलिजको तीन दिनमा ५० करोड, ६ दिनमा सय करोड, १० दिनमा १५० करोड, १५ दिनमा २०० करोड र २४ दिनमा २५० करोड कमाई गरेको छ ।
साथै फिल्म ‘तानाजी’ भारतीय फिल्मको इतिहासमा अहिलेसम्म धेरै कमाई गर्ने फिल्मको सूचीमा १२औँ स्थानमा समेत आएको छ । धेरै कमाई गर्ने शिर्ष स्थानमा बाहुबली–२ रहेको छ भने त्यसपछि दंगल, संजु, पिके, टाइगर जिन्दा है, बजरंगी भाइजान, वार, पद्मावत, सुल्तान, धूम–३, कबीर सिंह रहेका छन् ।
ट्याग्स: अजय देवगन, तानाजी